Iyo beta 5 ye macOS 11.3 inovanza iMac ine M1 processor | Ndinobva mac
Iyo beta 5 ye macOS 11.3 inovanza iMac ine M1 processor
Iyo beta vhezheni dzinowanzo kuve prelude kune akati wandei matsva maererano neApple michina uye ndiko kuti iyo kambani inoratidzira mune yekodhi kodhi zvimwe zvinoratidza zvemidziyo yayo yemberi. Mune ino kesi, chimwe chinhu icho isu tese takamirira kuuya kweM1 processor kune ese Mac makomputa, uye mareferensi eMac inoratidzwa mune kodhi yeiyo yazvino beta yakaburitswa nezuro.
Kubva pawebhu 9to5mac kuratidza maviri matsva eMac kodhi asina kumboonekwa kare, iMac 21,1 uye iMac 21,2. Aya makodhi akaonekwa pakati pekodhi yeiyo inoshanda system inopa chiratidzo chitsva nezve kusvika kweaya maM1 processor kune iMac.
Kuvhurwa kwavo kwaisazotora nguva yakareba, uye ndozvinodiwa nekambani yeCupertino ndeyekuti midziyo yese iendeswe kune ayo ma processor nekukurumidza. Ipapo isu taizoona dhizaini ichichinja mune imwe nguva, chimwe chinhu chisingaite senge chakakosha kwavari nhasi.
Iyo iMac inowanzo svika pakupera kwegore nguva zhinji asi iyo yapfuura yekuvandudza haina kubvumirwa kunze kuti iwedzere aya avo ma processor. Mhedzisiro yacho maererano nekuvimbika, kudyiwa uye simba reaya M1 izvozvi zviriko kupfuura zvakaratidza uye hatina mubvunzo kuti shanduko ichaitika nekukurumidza sezvazvinogonaNaizvozvo, vangangodaro vasina kana kumirira iyo yakareba kuti vagadzirise iMac uye vosiya dhizaini dhizaini yemberi.
Zvese izvi nezve dhizaini chinhu chinozivikanwa chete naApple, ichave nguva yekuona shanduko yemakuhwa uye pamusoro pezvose mirira Apple kuti isarudze kukwidza iyo M1 mune yayo iMac kuwedzera kana kusachinja dhizaini mune izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » Iyo beta 5 ye macOS 11.3 inovanza iMac ine M1 processor
Apple inosimbisa kuomerera kwayo kuAlliance for Water Stewardship
Muranda achave nemwaka wechitatu uye pamwe zvimwe